Xamaas: Lama kordhinayo xabad joojinta - BBC News Somali
Xamaas: Lama kordhinayo xabad joojinta
27 Luulyo 2014
Image caption Duqeynta Israa'il ay ka wado Qaza
Xamaas ayaa sheegtay inay dhowr gantaal ku riday Israa'il. Waxay diiday in la kordhiyo xabbad joojin 12 saacadood socon lahayd oo ku ekayd 9-ka fiidnimo ee sabtidii.
Xamaas ayaa sheegtay inay doonayso xabbada oo gebi ahaan la joojiyo ayagoo Israa'il ku eedeeyay inay heshiiska u isticmaalayso inay ku diyaariso weeraro kale.
Golaha wasiirada ee Israeli ayaa ka fakaraya codsi QM oo la doonayo in xabbad joojin lagu sameeyo 24 saacadood. Gantaalada kadib markii Israa'ill lagu gamay, dadka reer Falastiin waxay filayaan duqeyn kaga timaada Israa'il.
Tan iyo markii dagaalku bilowday in ka badan 1000 Falastiiniyiin ah iyo 42 Israa'iiliyiin ah oo 2 ka mid ah ay rayid ahayeen ayaa dagaalka ku dhintay.
Israa'il waxay sheegtay in dagaalka dhulka ah ee iminka ay ciidamadeedu wadaan loogu tala galay in lagu burbursho wadooyinka dhulka hoostiisa laga sameeyey ee dablayda falastiiniyiintu u soo maraan Israa'il.
Garabka hubeysan ee Xamaas ee Qassam Brigades, ayaa sheegay inay shan gantaal ku rideen Israa'il.
Dhanka kale kumanaan qof ayaa mudaaharaad ka sameeyay London ayagoo bannaan baxaas uga soo horjeeda dagaalka militariga Israa'il uu ka wado Qaza. Sidoo kale mudaaharaad ayaa wuxuu ka dhacay caasimada Faransiiska ee Paris kaasoo lagu taageerayay Falastiiniyiinta. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii Israa'il ay duqeyn ku bilowday Qaza ayadoo sheegtay inay joojinayso gantaalada ay Xamaas kusoo ridayaan Israa'il.